Ngathi | Doc.com
I-Doc.com yaqalwa ngenjongo yokubonelela umhlaba ngeendlela ezintsha zokhathalelo lwempilo olusisiseko oluzinzileyo nolungaxhomekekanga kwiinkqubo zokhathalelo lwempilo zemveli ezikhoyo kuzo zonke iindawo zehlabathi.
Ukuza kuthi ga ngoku iDoc.com inike iinkonzo zokhathalelo lwempilo ngaphandle kweendleko zemali kumawaka ezigulana kumazwe angaphezu kwama-20 aphucula ubomi bawo. Oku kwafezekiswa ngokudala imodeli yeshishini elitsha yokwenza "uLondolozo lwezeMpilo olusisiseko" lufumaneke kuye nakubani na ofikelela kwikhompyuter okanye kwi-smartphone.
UCharles Nader wazisa imodeli yeshishini elitsha kootitshala bakhe kwinkqubo yeStanford's Blitzscaling ebandakanya uRied Hoffman, umseki we-Linkedin kunye noChris Yeh, umbhali oshishino owaziwayo kunye nongxowankulu venture. Emva kokufumana ingxelo elungileyo kunye noChris Yeh ebiza imodeli ye-telemedicine ngemveliso ye-10X, inkampani inyuse imali yokuphuhlisa icandelo ledatha ye-blockchain kunye nokwandisa iinkonzo kwamanye amazwe angaphandle kweMexico. Oku kunike inkampani amandla okwandisa ukuya kumazwe angama-20 kwiLatin America kunye nokwandisa uphuhliso lwayo ukubonelela ngemveliso eyomeleleyo, ukubonelela abathengi abaninzi, kunye nokwenza ngcono kunye nokuphucula inkampani njengokuthenga igama iDoc.com kunye nokwandisa uphuhliso lobuchwepheshe kunye neshishini kwamanye amacandelo endawo yokhathalelo lwempilo. I-Doc.com yandise iinkonzo zayo ngokongeza ukuhanjiswa kwamayeza eMexico kunye nokusasazwa kwamayeza eLatin america. UCharles Nader, u-CEO we-Doc.com, waboniswa kwi-Cover of Forbes magazine kabini emele iDoc.com. Eli phephancwadi lakhankanya le nkampani njengenyathi yaseLatin American kwaye ikhankanyiwe kwezinye iimpapasho nakumajelo eendaba.
Namhlanje, iDoc.com ibonelela ngeenkonzo zayo "zeSiseko seMpilo esisiSiseko", kunye neenkonzo zexabiso eliphantsi, ngeelwimi ezingaphezu kwekhulu kwifomathi yokubhaliweyo nakwisiNgesi nakwiSpanish ividiyo ye-telemedicine ngeDoc App, kumazwe angaphezu kwama-20 ikakhulu eLatin America kunye ne-US ngezicwangciso zokwandisa kwihlabathi liphela.
Abaxhasi babandakanya iinkampani zeinshurensi, iTelecom, kunye nezinye kumashishini ahlukeneyo. UDoc.com ukwanguye waba liqabane elisemthethweni kunye nabanikezeli bezitofu ngexesha lobhubhane ukubonelela ngamayeza e-Covid kwihlabathi. Ngolu bambiswano, ngenkxaso yoorhulumente. I-Doc.com yongeza ixabiso kwimveliso yayo yokunceda abantu abasweleyo ngexesha lobhubhane.
Ngokuqonda ukufikelela kwetekhnoloji eguqula umhlaba esihlala kuwo, iDoc.com idibanise itekhnoloji kwaye yasungula imodeli entsha yeshishini eyondla evela kwi-epidemiological analytics, blockchain crypto-economics, telemedicine kunye nentengiso yamayeza ukubonelela abaguli abaninzi simahla iinkonzo zonyango. Ngokusisiseko iphuhlise inkqubo ezinzileyo engapheleli ekusebenzeni njengesixhobo senzululwazi ukunceda uluntu, kodwa ikwabonelela ngoncedo olufunekayo kubantu abasweleyo kwihlabathi liphela ngento esikholelwa ukuba yeyona nto ibalulekileyo ebomini… Impilo.
Kuba ngaphandle kwempilo, nokuba yeyempilo yengqondo okanye impilo; Ubuntu abunakho ukufezekisa konke okusemandleni abo.
Ukhathalelo lwezeMpilo olusisiseko kubo bonke ... Ilungelo loLuntu… UXwebhu uhambisa ingxelo yethu eqhubeka nokuphucuka nokukhula njengoko ixesha lihamba ngendlela eqaqambileyo eya kwikamva kunye neziphumo ezinokulinganiswa. Ubomi bunefuthe elifanelekileyo.
Iwebhusayithi yenziwe ngu Lou.